Alahady 23 Febroary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 23 FEBROARY 2020 -
“Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo”
« Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana, dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka Azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teni-vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ... » (2 Mpanjaka 23:3)
Niantomboka tamin’ny 9 ora ny fotoana. RAHARIJAONA Solofonirina Mpitandrina no nitarika raha RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy, Mpitandrina miana-draharaha no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahana.
Ny SAL 135 : 5-6 ; 13 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika. Ny hira FFPM 16 : 1-2 « AVIA, RY VAZANTANY O » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.
RAMINO Lalaina, mpampianatra ao amin’ny K9 no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny MAT 12 : 37. Mihevitra isika fa ny fihetsika sy asa ataontsika no mampiseho ny maha-izy azy antsika ka variana amin’ny fomba ivelany. Andriamanitra mandinika ny fontsika, avy ao no itenenan’ny vavantsika. Andeha isika ho sahy hijoro. Nisy teny notononin’ny mpitarika nasaina naverin’ny sampana. Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 489 : 2 “TENA SAMBATRA SY MAHA-TE-HO TIA”. Nisy vavaka famaranana ny 5 minitra ka notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra avy hatrany ny fotoana.
Nohiraina ny FF 4 : 2-3 « RY FANAHY O ! » dia nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina RAJAOFETRA Eric, Diakona. Namaky misesy ny perikopa voalahatra RAMAHANDRY Hanitra : II MPA 23 : 1-3 ; JAO 17 : 6-19 ; KOL 3 : 16-17.
Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 226 « TOMPO O MBA TE-HIHAONA » dia niroso tamin’ny toriteny.
Vavaka no nanombohan’ny Mpitandrina miana-draharaha ny hafatra nentiny. Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia ny II MPAN 23 : 1-3. Manao tombana (évaluation) ny orinasa na olona iray rehefa mifarana ny volana. Inona no nataonao satria mahatoky ny Teny Vavolombelon’ny Tompo? Ny mampiavaka ny mpanjaka Josia ny niverenany indray tamin’ny Tompo. Azo zaraina 3 ny hafatra eto :
ny fanekena atao manoloana ny maha-mahatoky ny teny vavolombelon’ny Tompo
fanekena hitandrina ny lalàny, ny Teny vavolombelony ary ny didiny
hankato ny Tenin’ny fanekena
1)	NY FANEKENA ATAO MANOLOANA NY MAHA-MAHATOKY NY TENY VAVOLOMBELON’NY TOMPO
Midika izany fa hanaraka Azy na handeha aoriana, misy hevitra 3 izany :
ny hita maso, ny Tompo no mitarika anao
efa lasa ny Tompo fa ianao no mandimby Azy amin’ny fanarahana ny Teniny
ny fiverenana indray ao amin’Andiramanitra : efa nandao fa indro niverina manana fitodihana ao amin’Andriamanitra (and.2), io fiverenana io dia anambarana (and.25) fa tsy misy toa azy ny mpanjaka teo alohany. Io ilay lazaina hoe fibebahana, efa fantany ny loza hanjo ny firenena amin’ny fanompoan-tsampy dia handeha hiresaka amin’ny mpaminanivavy raha tena hihatra tokoa izany. Eto amin’ny firenentsika maro no very, moa ve tena miverina tanteraka amin’Andriamanitra ny olona? Mila manaiky ianao fa ratsy ny nataonao ka mitodika sy mifona ary miova fandeha, tsy ny fandeha taloha intsony fa miaraka amin’Andriamanitra. Manao ahoana ny fibebahanao? Jesoa Kristy dia mialaza ao amin’ny MAR1 :15 hoe : “mibebaha ka minoa ny Filazantsara”. Mino ve ianao fa afaka hanova anao tokoa io Filazantsara io? Raha mbola ny lalan-dratsinao ialao izany, mitaona anao Andriamanitra hibebaka.
2) FANEKENA HITANDRINA NY LALANY, NY TENY VAVOLOMBELONY ARY NY DIDINY
Ny lalàna avy amin’ny teny hebreo dia fepetra manokana nomen’Andriamanitra mba harahina sy hekena. Ny didy nomeny rehefa mifanaiky amin’ny olona Izy. Mipetraka eo amin’ny toeran’ny mpanjaka ka mandidy ny vahoaka mahakasika ny fanompoana Azy sy ireo karazana fety teo amin’ny Jiosy, mijery ny fahamarinana ao anatin’izany Teny izany. Ny Soratra Masina dia mampianatra ny didy aman-dalàna ao amin’ny DEO, vonona ity mpanjaka ity ny hitandrina izany.
Jereo ny haben’ny fahasoavan’Andriamanitra ao amin’I Jesoa Kristy : isika variana anaty olana matetika, misy ny Teny sarotra sy sarotra tanterahana kanefa raha mino ny fiasan’ny Fanahy Masina ianao dia hotanteraka izany, afaka mikatsaka sy miaina izany didy izany, fantaro ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao. Jesoa ihany koa miteny hoe “katsaho aloha ny fanjankany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao izany”. Tongava amin’ny fanofanana, amin’ny famakiana sy fandinihana Soratra Masina.
3) HANKATO NY TENIN’NY FANEKENA
Manatanteraka no tadiavina aminao na inona na inona voasoratra ao amin’ny bokin’ny fanekena. Rehefa vonona hankato dia mila fanetrentena. Inona marina moa izany no antony andehananao miangona raha toa tsy hankato izany Teny izany ianao? Ho an’ny sasany tsy hita eny amin’ny fiarahamonina eny ny maha-kristiana azy, mitory Filazantsara, ilay olona manana disadisa, sarotra izany nefa izany no maha-kristiana “ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena”, moa ve tena mankato ny voasoratra anaty Baiboly ianao? Rahoviana ianao vao tena kristiana marina? Moa ve ny fianakaviana mba manome ho an’ny sahirana? Misy sahy mijoro ve rehefa misy fisotroan-toaka hoe tsy mety io?
Tombana no ataonao eo amin’ny fiainanao “tsy izay manao Amiko hoe Tompoko no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra” MAT 7 : 21. Ampaherezo ny akaikinao hoe manaova ny sitrapony. Efa manome fiainana sy fanantenana ianao. Aza be “discussion” fa rehefa miteny Andriamanitra dia araho, ho fantatrao fa hahomby ianao eo amin’ny fiainana. Mampahery anao ny Fanahy Masina, tanteraho fa vitanao izany.
Nisy feon-javamaneno fohy dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny hira FFPM 576 : 1 « RY SAKAIZAN’NY MPANOTA ». Natolotra ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ao amin’ny I JAO 3 : 1 ; 16 – 5 : 11. Natao ny hira FFPM 4 : 2 « MAMY NY FITIANAO ». Ny fanononana ny fanekem-pinoana niaraka tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah.4) no nanaraka izany. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina. Filazana ny vaovao tsara ho fantatry ny Fiangonana no nanaraka izany.
Razafimaharo Maminirina no nilaza vaovao tokony hofantarin’ny Fiangonana ary hotanterahiny sy hoentiny amim-bavaka. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SALAMO izany. Ireto no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahan’ny Fiangonana :
Famaranana ny faha-60 taonan’ny Amboarampeo Faravohitra : antsan-kira ny 29/02/2020 amin’ny 5 ora tolakandro hamoahana rakikira ; 01/03/202 amin’ny 3 ora sy sasany tolakandro
SMZM fifampiarahabana nahatratra ny taona ny 8 martsa 2020 ao amin’ny Akany Rainimamonjy, fandraisana anjara Ar 5000 sy rano fosotro
Asa vavolombelona iombonana ny sabotsy 29 febroary 2020 amin’ny 8 ora maraina : fanatsarana ny tanàna seminera FJKM Amparibe, ny zaridaina sy ny tokontany, araka ny voafaritra anaty vina, entanina ny Fiangonana hitondra fitaovana
FITOANTOKA dingana faharoa tanterahin’ny Mpitandrina, Diakona, AFF hitohy amin’ity herinandro ity.
TENY FANENTAN'NY MPITANDRINA
Taorian’izay, nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijana Solofonirina. Anisan’ny nolazainy ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny nahafahana nanatanteraka ny fotoana; ny fisaorana ny tompon’anjara. Nanao antso ho an’ny mpandray maniry hianatra SETELA izy ; nisaotra ny Vaomieran’ny Aim-Panahy (VAP) tamin’ny fitarihana ny fanombohana ny fandinihana ny filazantsaran’i Jaona (miaraka amin’ny lohahevitra). Nisy fanentanana FITOANTOKA (fitoriana an-tokantrano) koa : mahasoa antsika ny mizara. Momba ny asa vavolombelona iombonana dia efa fandaminan’ny FJKM hoe ny toerana misy mpiomana Mpitandrina ampian’izay Fiangonana akaiky azy (sakaizany), efa nanao lavarangana tao amin’io seminera io isika, nanentana izy ny, hitondrana zana-boninkazo. Nitohy tamin’ny fanolozan-jaza ny fotoana.
Nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 813 : 1 “TIA ZAZA” nandritra ny firosoan’ny ray aman-drenin’ANDRIATSILAVINA Ny Idealy Anaëlle teo amin’ny alitara, zaza natolotry ny Mpitandrina miana-draharaha mivady teo anatrehan’Andriamanitra. Rehefa izay dia nanao ny anjara hirany ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly. Nitohy tamin’ny vavaka notarihan’ny Mpitandrina izany.
Nisaotra noho ny toriteny izy ary nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe na ireo afaka nanatrika ny fiaraha-mivavaka na tsia ; ny fanohizana ny FITOANTOKA ; ny mpandray maniry hianatra ao amin’ny SEFALA ; ny fandinihana ny Filazantsaran’i Jaona ; ho an’ny fiofanan’ny tompon’andraikitra amin’ny 14 martsa 2020 ; ny asa vavolombelona eny amin’ny Seminera ; ho an’ny sahirana sy tsy salama ary mana-manjo ; ny tratran’ny tsi-fidiny sy voan’ny tsindry hazolena ; ny manana hataka manokana rehetra. Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.
Ranaivoson Jacky no nitarika izany, izay nialohavan’ny famakiana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I TIM 1 : 14-15. Ireto manaraka ireto ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : “Tompo ô fantatrao” an’ny RFF ; FFPM 476 : 2 “NY EO AKAIKINAO RY RAY” ; FFPM 461 :6 “AOKA HO AN’ANDRIAMANITRA”.
Ireo nangataka hira ireo dia : fianakaviana nahazo fahasoavana ; nahazo valimbavaka ary manana reny hiatrika fandidiana ; nahavita fianarana sy nahazo asa ; nahatratra ny tsingerin’andro nahaterahany sy maniry hanazo taranaka.
Natolotra ny rakitra tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 512 : 5 « HE MAHATOKY AHO, TOMPO ». Nisy feon-javamaneno. Nisy vavaka fangatahana nitondrana amim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana izay nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”.
Natao ny hira FFPM 582 : 3 « RY JESOA O ! TAHIO IZAHAY » dia notononina ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira FFPM 753 : 1 « TIAKO NY HIARAKA AMINAO JESOA » nofaranana tamin’ny Amena. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 10 ora sy 52 minitra ny fotoana. Mbola nisy ny fivorian’ny ankatoky ny Fandraisana.
Nitendry orga: Rajaofetra Antonio sy Rajaofetra Philippe ary Rajaofetra John
Diakona nanaty sy nanisa rakitra : Vaomieran’ny Vola sy Vaomieran’ny Aim-Panahy
Nandray feo ny toriteny: Ranaivoson Joël
Fafana: Rabiazamaholy Mahery
Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra Naka ny sary : Harentsoa Rova